Sida loo waco lambarka taleefanka iga hor istaagay | Madasha Mobile
Ignacio Sala | 22/09/2021 18:00 | Tababarada
Haddii aad gaartay maqaalkan, waxaa sabab u ah lambarka taleefankaaga waa la xanibay qofka aad rabto inaad la xiriirto. Sababaha uu qof kuu xannibay aad baa loo qiimeyn karaa oo maqaalkan waxaan uga hadli doonnaa laakiin waxay u badan tahay inay ku salaysnayd isla kuwa ay adeegsadaan shabakadaha bulshada.
Laakiin Sideen u wici karnaa lambarka taleefanka ee naga horjoogsaday? Sida shabakadaha bulshada waxaan leenahay tabaha kala duwan iyo / ama talooyin si aan uga gudubno xannibaadda oo aan ula xiriirno isticmaale, markii taleefankeenna la xannibay, waxaan sidoo kale leenahay tabaha taxanaha ah si aan uga gudubno.
1 Wac lambar qarsoon
1.1 Sida loo waco lambarada qarsoon ee iPhone
1.2 Sida loo waco lambarada qarsoon ee Android
1.3 Sida loo sameeyo wicitaano qarsoon taleefan kasta
2 U dir sms
3 Iyadoo loo marayo WhatsApp
4 Kala daadisay baraha bulshada
5 Hababka kale ee aan digital ahayn
6 Sida loo xakameeyo nambarka taleefanka ee Android
7 Sida loo xakameeyo lambar taleefan oo ku yaal iPhone
Wac lambar qarsoon
Haddii qofka aan dooneyno inaan wacno uu lambarkayaga ku daray liiska madow ee taleefanka casriga ah, macno malahan inta jeer ee aan wacno, wicitaanadayadu weligood ma soo wici doonaan on our smartphone qaataha. Waxa kaliya ee aan sameyn karno si aan u wacno wicitaankeena taleefankaaga casriga ah waa inaan qarinaa lambarka taleefankeena.
Dhibaatadu waxay tahay dad badan ha ka jawaabin wicitaanada lambarada qarsoon, mar haddii sida magacu tilmaamayo, ay u qarsoon yihiin sababo jira awgood. Dhowr sano ka hor, waxay ahayd wax iska caadi ah in laga helo wicitaanno lambarro qarsoon, tirooyin ay adeegsadaan shirkadaha suuq -geynta, laakiin tan iyo markii farsamadan la mamnuucay, ficil ahaan qofna ma isticmaalo.
Sida loo waco lambarada qarsoon ee iPhone
IOS wuxuu noo oggolaanayaa inaan qarinno lambarka taleefankeenna mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah wicitaannada aan ku sameyno menu -ka Dejinta, iyadoo la raacayo tillaabooyinka hoos lagu muujiyey:
Marka hore, waxaan marin u goobaha aaladda.
In menu Settings, waxaan helnaa ikhtiyaarka phone.
Liiska taleefanka, guji Tus aqoonsiga soo wacaha.
Dhalad ahaan, beddelka Aqoonsiga Wacaha ayaa la muujiyaa, taas oo noo oggolaanaysa inaan muujino lambarka taleefanka mar kasta oo aan wacno. Si aan ugu qarinno lambarka taleefankeena dhammaan wicitaannada aan sameyno, waa inaan gab shid.
Sida loo waco lambarada qarsoon ee Android
Android, sida macruufka, wuxuu noo ogolaanayaa inaan qarino lambarka taleefankeena dhammaan wicitaannada aan sameyno, annaga oo aan gelin lambarka USSD lambarka ka hor (sida aan ku sharxi doonno qaybta xigta).
para qari lambarka taleefanka Dhammaan wicitaannada aan ka sameyno lambarka taleefankeenna, waa inaan fulinaa tallaabooyinka aan ku tusnay hoos:
Marka hore, waa in la helo arjiga phone.
Codsiga dhexdiisa lagu magacaabo, guji goobihii ay matalayeen 3 dhibcood oo dooro Dejin Dheeraad ah.
Gudaha Dheeraad Dheeraad ah, waxaan doorannaa Aqoonsiga soo waca oo waxaan calaamadeynnaa ikhtiyaarka Qari lambarka.
Waa inaad xusuusataa curyaami astaantan marka aadan qorshayn inaad isticmaasho, tan iyo haddii kale, dhammaan wicitaannada aad hadda sameyso, ma tusi doonaan lambarka taleefankaaga.
Sida loo sameeyo wicitaano qarsoon taleefan kasta
Lambarada degdegga ah ama furayaasha hawlgalka USSD waxay noo oggolaadaan inaan la falgalno hawlgalka khadka taleefankeenna si aan u leexino wicitaannada, u dirno wicitaannada mashiinka jawaabta, ogaada dheelitirka ... Laakiin sidoo kale noo ogolow inaan asturno aqoonsigeenna markaan wacno.
Haddii aan dooneyno inaan waceyno taleefan qarinaya lambarka taleefankeenna, waa inaan furannaa codsiga taleefanka iyo geli lambarka taleefanka ka hor waxaan rabnaa inaan wacno * 31 #. Ma jirto meel bannaan oo u hadhsan * 31 # iyo lambarka taleefanka.
Haddii aanan la xiriiri karin annaga oo qarineyno lambarka taleefankeenna, mid ka mid ah xalalka aan haysanno ayaa ah dir SMS. Codsiyada noo oggolaanaya inaan ka horjoogsanno wicitaannada aaladda moobiilka si otomaatig ah uma horjoogsadaan farriimaha qoraalka ah, sidaa darteed waxay u badan tahay in xiriiriyahayagu uusan sidoo kale sii wadin inuu naga horjoogsado kanaalkan isgaarsiinta.
SMS -kan, marka hore waxaad haysataa dhammaan warqadaha cod -bixinta jawaab ha helin, waa inaan si cad u sheegnaa nafteena sida ugu macquulsan si aan isugu dayno inaan ku qancinno wada -shaqeeyahayaga inuu naga furo.
Iyadoo loo marayo WhatsApp
WhatsApp waa codsi dibadeed oo aan lagu darin macruufka ama Android, sidaa darteed aan lagu darin nidaamka. Sidan, marka adeegsaduhu ku xiro lambarka taleefankeena nidaamka si uusan wicitaanada uga helin taleefankeena, xannibaadkani kuma fidin karo codsiyada kale.
Ikhtiyaar kale oo aan haysanno si aan ula xiriirno qof naga horjoogsaday ayaa ah a fariin ama wicitaan ku soo dir WhatsApp. Haddii uu kaa xannibay WhatsApp, ma awoodi doontid inaad la xiriirto isaga, marka waa inaan sii wadnaa raadinta xulashooyin kale.
Haddii mid ka mid ah hababka kor ku xusan uusan noo oggolaan inaan dib ula soo xiriirno qofkaas maxaa yeelay waxay naga horjoogsadeen si kasta oo suurtogal ah, ikhtiyaarka kaliya ee dhijitaalka ah ee hadhay waa isticmaal baraha bulshada, marba haddii ay na xanibeen.
Hababka kale ee aan digital ahayn
Haddii aad dan gaar ah ka leedahay dib u soo nooleynta saaxiibtinimada qofkan oo kanaalada dhijitaalka ah aysan bixin natiijadii la filayay, maxaa yeelay waxay naga horjoogsadeen dhammaan aaladaha iyo shabakadaha bulshada, ikhtiyaarka kaliya ee aan ka tagnay waa La hadal qof is yaqaan si aad u shafeecaysaan labadiinaba.
Kani waa blog teknoloji nama xafiiska dareenka, laakiin marmarka qaarkood, dhibaatooyinka ay aaladaha dhijitaalka ahi noo soo bandhigaan waxay leeyihiin xal aad uga fudud inta ka baxsan isticmaalkooda.
Sida loo xakameeyo nambarka taleefanka ee Android
Si loo xakameeyo lambarka taleefanka ee Android, waa inaan fulinaa tallaabooyinka aan hoos ku tusayo. Iyadoo ku xiran mobile kasta, magaca xulashooyinka wuu kala duwanaan karaa, wax caadi ah sababtoo ah lakabyada habaynta Android.
Marka hore, waxaan fureynaa arjiga phone waxaana helnaa liiska wicitaanadii dhawaa.
Taariikhda wicitaanka, guji lambarka aan rabno inaan xanibno oo dooro ikhtiyaarka Xannib ama calaamadee sida spam.
Haddii aan dooneyno inaan ka horjoogsanno dhammaan wicitaannada lambarada taleefannada ee aan la aqoon, waa inaan helnaa dalabka taleefanka, guji saddexda dhibic ee toosan, guji Dejinta> Lambarada xiran oo waxaan doorannaa ikhtiyaarka aan la aqoon.
Sida loo xakameeyo lambar taleefan oo ku yaal iPhone
Haddii aan dooneyno inaan ku xannibno lambarka taleefanka iPhone si uusan mar dambe noo dhibin, waxaan u sii socon doonnaa sida soo socota:
Waxaan helnaa liiska wicitaanada aan helnay.
Guji i ku yaal dhinaca midig ee lambarka taleefanka si aad u xanibto kadibna guji badhanka Xiriir xir.
IOS ayaa sidoo kale noo oggolaanaysa inaan xannibno dhammaan lambarada taleefan ee aan la garanayn ee na soo wacay. Shaqadan waxaa laga heli karaa menu -ka Dejinta> Telefoonka> Aamusnaanta aamusnaanta. Markaad dhaqaajineyso hawshan, kaliya lambarada taleefan ee aan ku keydinay buugga taleefanka ayaa soo wici doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Tababarada » Sida loo waco lambarka taleefanka ee i xanibay
Sida loo hagaajiyo qaladka Khibradda Geforce 0x0003